Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पाकिस्तानमा २५ जुलाइमा हुने निर्वाचनको सरगर्मी बढ्यो – Emountain TV
पाकिस्तानमा २५ जुलाइमा हुने निर्वाचनको सरगर्मी बढ्यो
एजेन्सी, २६ असार । पाकिस्तानमा २५ जुलाइमा हुुने आम निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । दलहले प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छन् । नेसनल एसेम्बलीको २ सय ७२ सिटका लागि ३४ सय ५९ प्रत्यासी चुनावी मैदानमा छन् । केही उम्मेदवारमाथि सुुरक्षा चुनौती रहेका कारण सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
उम्मेदवारहरुले मतदातालाई आकर्षित गर्न विभिन्न आश्वासनसहित भ्रष्ट्राचार निर्मूूल पार्ने बाचा गरेका छन् । केही उम्मेदवारले भने बिद्युत आपूर्ति नियमित गर्ने, सडक, खानेपानी र महंगी नियन्त्रण गर्न आफनो प्रयास हुुने बताएका छन् ।
त्यसैगरी शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गरी सबैको पहुँ पुुर्याउन ध्यान दिने र युुवाहरुलाई रोजगारी उपलबध गराउने सम्मका आश्वासनहरु उम्मेदवारहरुले बाँड्दै आएका छन् । पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी र अवामी लिगका प्रत्यासीहरु बिरुद्ध जमात ए इस्मामिक पार्टीले सबैभन्दा बढी उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा उतारेका छन् ।
उता धार्मिक पार्टी सहित साना दलहरुले ४ सय ६० जनालाई चुनाव लड्न प्रतिस्पर्धी बनाएका छन् । चुुनाव आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै प्रयास गरिरहेको जनाएको छ ।
सुरक्षाको भरपर्दाे प्रबन्ध मिलाइएको भनेतापनि केही उम्मेदवारहरुमाथि सुुरक्षा थ्रेट रहेकाले चेक जाँच कडा पारिएको जनाइएको छ । पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पार्टीको अध्यक्ष इमरान खान सहित ६अन्य नेतामाति आतंकबादी आक्रमण हुुन सक्ने संभावनाका कारण उनीहरुको सुरक्षा प्रबन्ध कडा बनाइएको छ ।
यसअघि पाकिस्तानको सर्बाेच्च अदालतले जाली बैक खाताको मामिलामा पूुर्व राष्ट्रपति र तथा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका सहअध्यक्ष आसिफ अली जर्दारी र उनकी बहिनी फरयाल तालपुुरलाई बिदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ ।
त्यस्तै भ्रष्ट्राचार मुद्धामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई १० बर्ष उनकी छोरी मरियमलाई ७ बर्ष र ज्वाइलाई १ बर्षको काराबास सजाय सुनाएको थियो ।